Afrika - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 Luulyo, 2014, 17:34 GMT 20:34 SGA
Maxaabiis ka baxsatay Koongo
Ugu yaraan 250 maxaabiis ah ayaa ka baxsaday xabsi ku yaal magaalada Bukavu ee bariga Koongo. Saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof la dilay.
Qorshaha AU ee SoomaaliyaMaqal04:51
Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa wareysi uu siiyey BBC-da waxa uu ka warbixiyey howlgallada AMISOM 4 June 2014
Dad badan oo lagu laayay Nigeria
BBCda ayaa waxa ay ogaatay in dagaalyahano ka tirsan kooxda Boko Xaraam, ay ku dileen tobaneeyo qof tuulooyin ku yaal gobolka Borno.
Hargeysa: Koranto dabayl laga dhaliyay
Markii ugu horreysay ayaa koranto laga dhaliyay dabaysha waxaa lagu rakibay garoonka caalamiga ee Cigaal ee Magaalada Hargeysa .
USA oo safiir u magacaabaysa Soomaaliya Madaxweyne Obama ayaa lagu wadaa in uu safiirkii ugu horreeyay u magacaabo Soomaaliya tan iyo markii dalkaasi uu ku hoobtay dagaal sokeeye muddo ka badan labaatan sano. 3 June 2014
Malaayiin loo diiday daawada xannuunka.
Khuburada caafimaadka ayaa sheegtay in la'aanta dawada xannuunka la dagaalanta ee la siiyo bukaanada ay tahay xaalad laga walwalo.
Madaxweynaha Malawi oo xilka la wareegaya
Waxaa xilka la wareegaya madaxweynaha cusub ee Malawi Peter Mutharik kadib doorasho lagu murmay.
Qarax dhacay waqooyi bari Nigeria
Booliska Nigeria ayaa sheegay in ay 14 qof ku dhinteen weerar bambaano oo ka dhacay magaalada Mubi ee ku taalla waqooyi bari ee dalkaasi.
Dagaalo ka dhacay gobolka Bakool
Dagaal xooggan ayaa shalay gelinkii dambe deegaanka Aato ee gobolka Bakool waxa uu ku dhexmaray ciidammada dowladda iyo Al-shabaab.
Sudan oo beenisay siidaynta Maryam
Dowladda Sudan aya abeenisay in la sii daynayo Maryam Ibraahin oo lagu xukumay dil kadib markiiay ka baxday Islaamka.
Weerar kale oo ka dhacay xeebta kenya
11 Luulyo 2014
US: Diyaar baan u nahay dhexdhexaadin
Taageerayaal Ghana ah oo is dhiibay